Semalt: Mhando dzakasiyana dzeTrojans Uye Zvavakaita
Frank Abagnale, iyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti Trojan yakagadzirwa nekuda kwebhengi ruzivo kubva kuvashandisi veIndaneti. Idzi idzi dzinopararira kuburikidza nemamayipi, keyloggers uye pop-up ads. Inoshandisa mamiriyoni e zombie makombiyuta kuti iite hurongwa hwekugadzira, nekurwisana kunotarisirwa mabhengi ebhangi pamwe nekubira data yega. Trojans inounganidza ruzivo, uye FBI yakaratidza kuti yakaona cybercriminal yakashandisa Zeus kutora mari inopfuura $ 20 mamiriyoni kubva kumabhanki eCanada.
Kusiyana kweTrojans Mitauro:
Trojans inogona kuiswa muzvikamu zvakasiyana-siyana zvichienderana nekushanda kwavo uye marudzi ekurwisa - bateria vision spinner ii charging.
Ganda rekuchengetedzwa kwekombiyuta rinopa vanokanganisa mukana wekugadzirisa foni yako uye kukanganisa huwandu hwemakombiyuta. Zvinonyanya kuita kuti muumbi wavo agone kuita mabasa akasiyana-siyana iye aanofarira zvikuru, kusanganisira kutumira, kutanga, kubvisa uye kugamuchira mafaira, kubvumira makombiyuta nekuratidzira dheta. Ikoko yeTrojans inoshandiswa yakawanda inoshandiswa pakabatanidza mapoka emakombiyuta akakundwa uye kuumba zombie kana botnet network.
Kushandisa zvinoshandiswa neTransti iyo ine dambudziko re data nedhiyo uye inotora zvigaro zvekushaya simba mukati memakombiyuta kana kuti foni yako.
Rootkits yakagadzirirwa kuvanza zvinhu zvakananga nemabasa pamushini wako. Chinangwa chavo chikuru ndechekuparadzira zvinhu zvinokuvadza pasi rese webhutta nekuwedzera nguva iyo mapurogiramu ako anotakura zvakanaka.
Ndiyo rudzi rweTrojan runobatsira vanokanganisa kuba iyo data yevashandisi vakasiyana-siyana.Vanyengeri vanoshandisa ruzivo urwu nekuba mari kubva kumabhanki eIndaneti, makadhi uye makadhi ekubhadhara uye e-kubhadhara zvirongwa.
Trojan-DDoS inofanirwa kuita zvese zveDoS (Denial of Service) kurwisana neakakonzerwa nekero yewebhu. Iyo inotumira zvikumbiro zvakawanda kune vashandisi uye inokonzera nhamba huru yemakironga emakombiyuta.
Unofanira kugara uchitarisa kushanda nemabasa ehurongwa hwako kuitira kuti tsika dzisina kukodzera dzingabviswa. Zvose zvekushandisa kwako ne software zvinofanira kuongororwa kunyanya kuchengetedzwa kwako.
Vashandisi vanofanira kudzidziswa kudzivisa kubva pamabasa anovaisa pamatambudziko ekutapukirwa kwepabonde uye kurwiswa kwemarware.
The Trojan SMS ichakubhadhara mari uye kutumira mameseji kubva nhamba yako yekufambisa kuenda ku-premium rate nhamba dzefoni zuva nezuva.
Trojan tsvina ndiyo mapurogiramu anowanikwa panzvimbo dzako maitiro uye achinyengedza mazwi ako ezvinyorwa, kutora zvidzidzo uye uwane mazita emabasa ako ose ekushanda.
Yakakurudzirwa antivirus, anti-Trojan, uye anti-malware tools